YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, February 08
by Ayeyarwady Bank on Tuesday, February 7, 2012 at 12:19am ·
A. SEND and RECEIVE INSTRUCTIONS
1. Go to AYA QUICK Remit location in Malaysia (Kuala Lumpur, Melaka).
2. Fill in the “Send Application Form” including full name, Passport Number, Work Permit/VISA/Immigration Card and Contact Information.
3. Give the agent the completed form along with the money you wish to send, the sending fees and identification documents.
4. Receive the customer’s copy of send form, note the authorized signature and money transfer transaction number.
5. Contact the beneficiary and relay the information (amount received in Kyats, prefer collection branches and transaction number) required to collect money.
1. Go to prefer collection branches of AYA branches and other banks’ braches that link with AYA Bank.
2. Provide the information of the transaction number and amount to receive.
3. Hand in the National Identification Card Number and receive cash.
No. 25, Jalan Medan Pasar,
NO.60 JALAN MUNSHI ABDULLAH,
Work Permit/VISA/Immigration Card Number and Expiry Date
Indicate preferred collection branch of Ayeyarwady Bank in Myanmar (refer to preferred collection branch list as provided by Send Agent
Range (MYR) Service charge Per Transaction (MYR)
For payout at AYA branches – No additional charges
For payout at AYA’s Domestic Agent Bank – Based on remittance charges in Kyats
Flat fee of MYR10 to be deducted by RBHQ
၁။ AYA QUICK Remit ဌာန ရှိသော နေရာသို့သွားပါ ( KL နှင့် မလက္ကာ တွင် ရုံးခွဲများရှိပါသည်)
၂။ Send Application Form ကို တောင်းပြီး ဖြည့်ရပါ။ (အမည် အပြည့်အစုံ၊ ပတ်စ်ပို့နံပါတ်၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ အခြား လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ နှင့် လိပ်စာ)။
၃။ ဘယ်လောက် လွှဲမယ်ဆိုတာကို ထည့်ပြီး အဲဒီ လျှောက်လွှာကို အေးဂျင့်သို့ပေးပါ။
၄။ သတိပြုရန်။ ပြန်ပေးသော လက်ခံကို သိမ်းထားပါ။ ထိုအထဲတွင် လက်ခံသူ လက်မှတ် နှင့် ဘယ်လောက် လွှဲထားတယ်ဆိုတဲ့ ပမာဏကို သေချာစစ်ပါ။
၅။ မြန်မာငွေကျပ် လက်ခံမည့် သူကို အကြောင်းကြားပါ။
၁ မှ ၁၅၀၀ အတွင်း ကို ၁၂ ရင်းဂစ်
၁၅၀၁ မှ ၃၀၀၀ အတွင်းကို ၁၅ ရင်းဂစ်
၃၀၀၁ မှ ၆၀၀၀ အတွင်းကို ၂၀ ရင်းဂစ်
လက်ခံမည့်သူသည် ထပ်ဆောင်းပေးစရာ မလိုပါ။
ပြန်အမ်းငွေအတွက် မလေးရှား ၁၀ ရင်းဂစ် နှစ်ပါမည်..
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/08/20120အကြံပြုခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပကတိလိုအပ်ချက်အရ တပ်မတော်ဟာ အနာဂတ်နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ရမယ် ဆိုတဲ့အချက်ဟာလက်ရှိကာလမှာမှန်ကန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးလေ့လာသူများက ထောက်ပြပြောဆိုလျှက်ရှိပါ တယ်။ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်အရ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလွှတ်တော်မှာ(၂၅)%ပါဝင်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်မှာပြည်သူ များတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးရာကို ၀န်ကြီးချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးခွင့်ရသူက ချယ်လှယ်ထား
ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးရာ ကိစ္စ အရပ်ရပ်ကို ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်၏ ကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ရထားသူ အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်ရှိသူ တစ်ဦးက ချယ်လှယ်ထားကြာင်း သတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ပြည်နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးကြီး ဦးဇော်သိန်း ဖြစ်သည်။
" သူက ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရထဲမှာ စစ်အစိုးရ လက်ကျန် အဆင့်မြင့် စစ်အရာရှိကြီး ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့် ရထားသူဖြစ်တယ်။ သူက အရင်က ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ အငြိမ်းစား ယူထားပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်ကို ယူထားတဲ့ သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ၀န်ကြီးချုပ် လှမောင်တင်ရဲ့ လက်မှတ်ကိုလည်း ထိုးခွင့်ရထားတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးရာ ဟူသမျှ သူက ၀န်ကြီးချုပ် အထက်ကနေပြီး ချယ်လှယ်နေပါတယ်" ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ အစိုးရ အရာရှိကြီး တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဦးဇော်သိန်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ကိစ္စ အရပ်ရပ်တွင် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ပြီး သူ၏ သဘောတူညီချက် မရလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့အနေဖြင့်် လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်၍ မရကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့ ကလာသော အတွင်း သတင်းများအရ သိရသည်။ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်ကပင် ဦးဇော်သိန်းကို ကြောက်နေရကြောင်း အမည် မဖေါ်လိုသူ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီး တစ်ဦးကလည်း ပြောသည်။
" သူက စစ်အစိုးရ လက်ထက် ကတည်းက ကျန်နေခဲ့တဲ့ လက်ကျန် ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တော့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ တစ်ခုလုံးကို မှောက်ချင်မှောက်၊ လှန်ချင်လှန် လုပ်လိုရနေတယ်။ သာမန် ၀န်ကြီးတွေကိုထား ၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် တစ်ခါ တစ်လေ တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ သူ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ ပီးရင် ဦးဇော်သိန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အကြောင်းတွေ၊ မကောင်းတာကိုရော ကောင်းတာကိုရော သိထားတော့ ဦးလှမောင်တင်က သူ့ကို လွန်ဆန်လို့ မရဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ပြည်နယ်မှူး ဦးဇော်သိန်းသည် သူ၏ ပါဝါကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး စစ်တွေမြို့ပေါ်က ပြည်သူပိုင် မြေကွက်တစ်ခုကို သူ့ဇနီးနာမည် ဖေါက်ကာ စီးပွားရေး သမား တစ်ဦးကို ရောင်းချ ထားကြောင်း သည်။
" ဦးဇော်သိန်းကို ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်တောင် ပြန်မပြောရဲဘူး ဆိုတော့ တော်တော့ကို သြဇာ အာဏာကြီးနေပါတယ်။ လာဒ်ပေး လာဒ်ယူမူတွေ အများအပြားမှာလည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်။။ စစ်တွေမြို့ပေါ်က ပြည်သူပိုင် မြေကွက် တစ်ခုကို သူ့ဇနီး နာမည် ဖေါက်ပြီး ရောင်းစားလိုက်တယ်။ ဘယ်သူမှ သူ့ကို မပြောရဲကြဘူး။ ခုလို ပြည်သူပိုင် အိမ်ကွက်ကို ရောင်းစားတာကို အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် လူကြီးတွေ သိပေမယ့် မပြောရဲကြဘူး" ဟု အစိုးရ အရာရှိကြီးက ပြောသည်။
ဦးဇော်သိန်းမှ ဇနီး နာမည် ဖေါက်ပြီး ရောင်းစားလိုက်သော မြေကွက်မှာ အမှတ်(၁၅)၊ ကျေးပင်တန်း အကွက်၊ အုပ်စု (၄၂) ၊ မြို့မ မြောက် အုပ်စု၊ စစ်တွေမြို့ ဖြစ်သည်။
"အခု အဲဒီမြေအကွက်မှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ပိုင်သွားပြီ ဖြစ်တယ်။ သူ့ကို ဦးဇော်သိန်းက ဘယ်လောက်နဲ့ ရောင်းတယ်ဆိုတာတော့ စုံစမ်းလို့ မရသေးဘူး။ ပြောနေကြတာက ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ၀န်းကျင်နဲ့ ရောင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးဇော်သိန်းရဲ့ ဇနီးအမည်နဲ့ မြေကွက်ကို ရောင်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်" ဟု သူက ဆက် ပြောသည်။
ဦးဇော်သိန်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သော ပါမစ်များ အားလုံးကို သူတစ်ယောက်တည်းက ချုပ်ကိုင်ထားပြီး ရခိုင် ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား လက်မှတ် ရေးထိုးကာ ပါမစ်များကို ခွင့်ပြုနေကြောင်း သိရသည်။
ဦးဇော်သိန်းသည် သစ်ပါမစ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပါမစ်က အစ နွားပါမစ်ထိ ကိုင်ထားပြီး စစ်တွေမှ နွားသတ် လိုင်စင်များကို တာဝန်ယူ လိုင်စင်ချပေးရသူ ဖြစ်သဖြင့် နွားလိုင်စင် ရသူများနှင့် အထူး ရင်းနှီးသူ ဖြစ်ကာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အထူးသောင်းကျန်းနေသော နွားခိုးဂိုဏ်းများမှလည်း ဆက်စပ်မူ ရှိကာ ချယ်ယာများ ရယူနေသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးမှု မြန်မာ အားနည်းလွန်း
ဗုဒ္ဓဟူး, 08 ဖေဖော်ဝါရီ 2012
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ် ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ အင်္ဂလန်အခြေစိုက် Maplecroft စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ သုတေသနအဖွဲ့တခုရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီး၊ ဒီ ဥပဒေတွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုပိုင်း အားနည်းချက်သာ ဖြစ်တယ်လို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့ သုံးသပ်ပြပါတယ်။ ကိုသားညွန့်ဦးက စုံစမ်းမေးမြန်းထားပါတယ်။
ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း ၁၉၇ ခုနှစ်ကို လေ့လာထားတဲ့ Maplecroft သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာထဲ၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေအပေါ် အကာအကွယ်ပေးမှု အား အနည်းဆုံး နိုင်ငံတွေထဲမှာ ရေနံနဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေပေါကြွယ်တဲ့ မြန်မာ၊ တောင်ဆူဒန်၊ Turkmenistan လစ်ဗျား၊ အင်ဂိုလာနဲ့ အီရတ်နိုင်ငံတို့ စာရင်းထဲ ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အန္တရာယ်များတဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းတဲ့အခြေအနေကို အဓိကဇောင်းပေး ဖော်ပြတဲ့ အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအပါအ၀င် အဲဒီလို ဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြမယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေ လုပ်ငန်းတွေအဖို့ အတော်လေး သတိထားရမယ့် အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ အစီရင်ခံစာရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေရှိပြီးသားဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီအပေါ်မှာ ဥပဒေစိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့နေတာဟာ အဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲပညာရပ်ဆိုင်ရာ မဟာဘွဲရ၊ လက်ရှိလည်း လုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်သူ ဦးမင်းခင်က ပြောပါတယ်။ လက်ရှိ နိုင်ငံတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကို တရားဝင်ဘောင်အတွင်း လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ခွင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခွင့် ရှိဖို့ အခြေအနေလိုမယ်လို့ သူက ထောက်ပြပါတယ်။
“ရှိထားတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေနဲ့ တည်ဆဲဥပဒေအရတော့ အထိုက်အလျောက်ကာကွယ်မှုက နဂိုလ်ကတည်းက ရှိပြီးသားပဲ။ အဲဒါတွေကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီး အကာအကွယ်မပေးနိုင်တာက တကယ့်ပြဿနာလို့ ထင်တယ်။ တတိုင်းပြည်လုံးမှာလည်း ယေဘူယျ ဥပဒေစိုးမိုးမှု အားနည်းလာတာ တောက်လျှောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လေ။ အဲဒါတွေရဲ့ သက်ရောက်မှုရှိတယ်။ နောက်တခု လက်တွေ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာ စီးပွားရေးလုပ်ရခက်တဲ့ ကိစ္စတွေပေါ့၊ မလိုလားအပ်တဲ့ စရိတ်စကတွေ အရမ်းများပြီးတော့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရကိုင်ရ ခက်လာတာ၊ legally သွားလို့ မရတာတွေ၊ ပိုပြီး များလာတာပေါ့။ အဲဒါတွေက အခက်အခဲတွေဖြစ်လာတယ်။ အဲလိုဖြစ်လာတော့ ဒါတွေကို ရှောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှာလာကြာတာတွေလည်းရှိတယ်။ ပိုပြီးတော့ legally ဥပဒေကြောင်းအရ အကာအကွယ်ပေးဖို့ ခက်လာတဲ့ အကြောင်းရပ်တွေလည်း ရှိလာပါတယ်။”
စီးပွားရေးဆောင်းပါးရှင် ခင်မောင်ညို(ဘောဂဗေဒ)ကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ ဥပဒေပြောရင် အခြေခံကအစ ပြောင်းလဲစရာတွေ အတော်များများရှိနေသေးတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
“အခြေခံကစပြောရမှာပဲ။ တကယ်တမ်း ဒီမှာက ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလည်း ပြောရမှာခက်တယ်။ အချို့နေရာတွေမှာ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုက မရှိဘူး။ ဥပမာပြောရရင် စိုက်ပျိုးရေးဆိုရင် ကိုယ်စိုက်ချင်ရာစိုက်မယ် ကိုယ်ရောင်းချင်တဲ့သူကို ရောင်းမယ် ၀ယ်ချင်တဲ့သူ ၀ယ်မယ်ပေါ့ ဒါမျိုးလေးတွေကအစ ဒီမှာတော့မရှိဘူး။ အခြေခံမှာကိုက အတော်လေး လိုသေးတာပေါ့။ လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တောင် ရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။”
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေ ဖယ်ရှားပြီး၊ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ၀င်ရောက်ခွင့်ရဖို့အတွက် လက်ရှိ အစိုးရသစ်နဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူတွေက လိုလားနေတာပါ။ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို အခွင့်အရေးတွေ မက်လုံးတွေပေးပြီး စည်းရုံးတာမျိုးရှိပေမယ့်၊ တကယ်တမ်း ကိုယ့်အတွင်းက ပြင်ဆင်စရာတွေကို ဦးစွာဆောင်ရွက်ဖို့လိုမယ်လို့ ဦးမင်းခင်ကတော့ မြင်ပါတယ်။
“ဒီနေ့အထိက ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဥပဒေအရ တရားဝင် လုပ်တဲ့ကိုင်တဲ့သူတွေကို အကာအကွယ်ပေးရေး တရားသဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး လုပ်နိုင်ရေးပေါ့ဗျာ၊ အဲဒါတွေ တဖက်က ရှိဖို့လိုတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့သူတွေတင် မကဘူးပေါ့၊ စီးပွားရေးကို တရားသဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်တဲ့သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေက တာဝန်ခံနိုင်တဲ့ responsiblity accountability ရှိရှိ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒါတွေ မရှိပဲ အခုနကလို အခွင့်အရေးတွေ ပေးလည်းပဲ၊ တကယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ အားကိုးလောက်တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ လာဖို့ သိပ်မလွယ်သေးဘူး။ အဲဒီအပိုင်းကိုလည်း အခုအထိ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ပုံမရသေးဘူးဗျ။”
Maplecroft အဖွဲ့ရဲ့ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ ငါးနှစ်တလျှောက်လုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် စိတ်မချရတဲ့ ဥပဒေစိုမိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံစာရင်းထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေခဲ့တာပါ။ မြန်မာအစိုးရဟာ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကို ချုပ်ကိုင်ထားပြီး တရားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာ ၀င်ရောက်စွတ်ဖက်မှုရှိတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။
ဒါကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေတွေ ရေရှည်တည်တံပြီး အားကောင်းလာဖို့ဆိုရင်တော့ တရားရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိဖို့၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ပိုပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့အပါအ၀င် ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိစ္စရပ်တွေမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့ လိုမယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ထောက်ပြအကြံပေးထားပါတယ်။
လှိုင်သာယာ ဆန္ဒပြအလုပ်သမား​များ​ကို အလုပ်ဖြုတ်မည်ဟု သတိ​ပေး​
Published on February 8, 2012 by နေသွင်
လစာတိုး​ပေး​ရေး​ ​တောင်း​ဆိုဆန္ဒပြ​နေတဲ့​ အလုပ်သမား​တွေကို ဆက်ပြီး​ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင် အလုပ်က ဖြုတ်ပစ်မယ်လို့​ အလုပ်ရှင်က သတိ​ပေး​လိုက်တဲ့​အတွက် မ​ကျေမနပ်ဖြစ်​နေကြပါတယ်။
ရန်ကုန်၊​ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ထဲက တရုတ်လူမျိုး​တဦး​ပိုင်တဲ့​ တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံက အလုပ်သမား​ ၂ ​ထောင်​ကျော်ဟာ လစာတိုး​ပေး​ဖို့​အပါအဝင်၊​ သူတို့​ရဲ့​ နစ်နာချက်​တွေရရှိ​ရေး​အတွက် ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၆ ရက်​နေ့​ကစလို့​ သုံး​ရက်ဆက်တိုက် ဆန္ဒပြု​နေကြတာပါ။
ဒီ​နေ့​မှာ အလုပ်ရှင်ရဲ့​ ကိုယ်စား​လှယ်​ရောက်လာပြီး​ အလုပ်သမား​တွေရဲ့​ ​တောင်း​ဆိုချက်ကို မလိုက်​လျောနိုင်တဲ့​အ​ကြောင်း​၊​ ​နောက်ထပ် ၃ ရက် အလုပ်မရှင်း​ဘဲ ဆက်ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင် အလုပ်ဖြုတ်မယ်လို့​ သတိ​ပေး​သွား​တဲ့​အတွက် မ​ကျေမနပ်ဖြစ်​နေကြတာပါ။
ဆန္ဒပြပွဲကို သွား​ကြည့်​ခဲ့​တဲ့​ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​လှုပ်ရှား​သူ မစုစု​နွေး​က “အလုပ်ရှင်က ​နောက်ထပ် ၃ ရက်ထက်ပိုပြီး​ အလုပ်မဆင်း​ရင် အလုပ်ကထုတ်ခံရမယ်။ ​ကျွေး​တဲ့​လက်ကို ပြန်ကိ်ုက်တယ်ဆိုပြီး​ ​ခွေး​နဲ့​နှိုင်း​ပြီး​ ​ပြောတယ်။ အလုပ်ရှင်က ခြိမ်း​ခြောက်တယ်ဆိုပြီး​တော့​ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး​ အလုပ်ရှင်နဲ့​ အလုပ်သမား​ဦး​စီး​တွေ ရှင်း​ပေး​တာကို လက်မခံဘူး​ဆိုပြီး​ ​ဝေး​ဆိုပြီး​ ​အော်ပြီး​ အလုပ်ရုံအပြင်ကို ထွက်သွား​ကြတယ်။ အပြင်မှာ ဝိုင်း​အော်ကြပြီး​ အလုပ်ရှင်ကို ​ရေသန့်​ဘူး​တွေနဲ့​ ​ပေါက်တယ်။ အလုပ်ရုံကို ပိတ်​ပေး​ဖို့​၊​ မပိတ်​ပေး​ခဲ့​ရင် သူတို့​တောင်း​ဆိုတာ ​ပေး​ဖို့​ဆိုပြီး​ အလုပ်ရုံထဲမှာ စီတန်း​ပြီး​အော်​နေကြတယ်” လို့​ ​ပြောပါတယ်။
အလုပ်သမား​တွေက လခတိုး​ပေး​ရေး​နဲ့​ အလုပ်ချိန်​လျှော့​ပေး​ဖို့​၊​ အလုပ်သမား​တွေအချင်း​ချင်း​ကြား​မှာ အခွင့်​အ​ရေး​ တန်း​တူမ​ပေး​ဘဲ ခွဲခြား​ဆက်ဆံတာ၊​ အလုပ်စည်း​ကမ်း​တွေ တင်း​ကျပ် လွန်း​တာ​တွေကို ​လျှော့​ပေး​ဖို့​အပါအဝင် အချက် ၁၁ ချက်ကို ​တောင်း​ဆိုခဲ့​ကြပါတယ်။
မ​နေ့​ကစလို့​ စက်ရုံအဝင်အထွက် လမ်း​မ​တွေကို ရဲ​တွေက ပိတ်ထား​လိုက်ပါတယ်။ အလုပ်သမား​တွေက​တော့​ ​တောင်း​ဆိုချက်​တွေရတဲ့​အထိ ဆန္ဒပြသွား​မယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။
ဆန္ဒပြအလုပ်သမတဦး​က “ပုံမှန်လစာ ဆု​ကြေး​ပါတယ်။ အချိန်ပို​ကြေး​ပါတယ်။ တာဝန်​ကျေ​ကြေး​၊​ ရက်မှန်​ကြေး​၊​ အား​လုံး​ပေါင်း​မှ ​ခြောက်​သောင်း​ခွဲ​လောက် ရတယ်။ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ ဇန်နဝါရီလက ပိတ်ရက်က အမျိုး​မျိုး​ ၈- ၉ – ၁၀ ရက်ရှိတယ်။ အဲဒီပိတ်ရက်​တွေကို ဖြတ်ချလိ်ုက်တယ်။ အဲဒါ​ကြောင့်​ အများ​ကြီး​ကွာသွား​တာ။ ၈ ​ထောင်၊​ ၉ ​ထောင်၊​ ၁ ​သောင်း​ အဲဒါမျိုး​ ဖြတ်ချသွား​တယ်” လို့​ ​ပြောပါတယ်။
ဒီစက်ရုံမှာ တ​နေ့​ အလုပ်ချိန် ၈ နာရီထက်ပိုခိုင်း​ရုံသာမက၊​ တနင်္ဂ​နွေနဲ့​ အစိုး​ရ ရုံး​ပိတ်ရက်​တွေအတွက်ပါ လခထဲက ဖြတ်တဲ့​အ​ပေါ်မှာ အလုပ်သမား​တွေက မ​ကျေမနပ်ဖြစ်​နေကြတာပါ။
ဆန္ဒပြ​ခေါင်း​ဆောင်တဦး​ကလည်း​ စက်ရုံထဲက အလုပ်သမား​တွေဟာ နှစ်​ပေါင်း​များ​စွာ ဥပ​ဒေချိုး​ဖောက်တာကို ခံ​နေရတယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။
“အဓိကကျတဲ့​ သူတို့​ရဲ့​ချိုး​ဖောက်မှုက ဒီစက်ရုံက ၁၅ နှစ်နီး​ပါး​ရှိပြီ။ ၁၅ နှစ်လုံး​မှာ ပိတ်ရက်​တွေကို အလုပ်သမား​ကို လုပ်ခလုံး​ဝမ​ပေး​bဲနဲ့​ ပစ်ထား​တယ်။ ၆ ရက်လုပ်မယ်၊​ တပတ်တရက် ပိတ်တယ်။. အဲဒီတရက်က အလုပ်လုပ်တယ်လို့​ သတ်မှတ်တယ်။ ဥပ​ဒေအရ၊​ ဒါ​ပေမယ့်​ အဲဒါကို မ​ပေး​ဘူး​၊​ နာရီ​ကြေး​နဲ့​ပေး​တယ်။ တနာရီ​ကြေး​နဲ့​ပဲ ​ပေး​သွား​တယ်။ တပတ်မှာ ၄၈ နာရီဆိုရင် ၄၈ နာရီခပဲ​ပေး​တယ်။ တနင်္ဂ​နွေခ လုံး​ဝမ​ပေး​ဘူး​။”
စက်ရုံမှာ မနှစ်တုန်း​ကလည်း​ အလား​တူ ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ခဲ့​ပြီး​ သက်ဆိုင်ရာက ဝင်​ရောက် ​ဖြေရှင်း​ပေး​ခဲ့​ဖူး​ပါတယ်။
လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​လှုပ်ရှား​သူ မစုစု​နွေး​က​တော့​ အလုပ်သမား​တွေရဲ့​ အခွင့်​အ​ရေး​တွေကို အကာအကာ​ပေး​နိုင်တဲ့​ အဖွဲ့​အစည်း​လိုအပ်​နေတဲ့​အ​ကြောင်း​ ​ပြောသွား​ပါတယ်။
“အစိုး​ရက မြို့​နယ်တိုင်း​ကို အလုပ်သမား​အဖွဲ့​တွေ ဖွဲ့​ထား​ပေး​တာ အလကား​ဖွဲ့​ပေး​ထား​တာ မဟုတ်ဘူး​။ အလုပ်သမား​တွေရဲ့​ အခွင့်​အ​ရေး​တွေကို ချိုး​ဖောက်ခံရတာကို ကာကွယ်​ပေး​ဖို့​ ဖွဲ့​စည်း​ပေး​ထား​တာ။ အခုလိုမျိုး​ စက်ရုံအလုပ်ရုံမှာ ဖြစ်ပျက်​နေတဲ့​ ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို သူတို့​က စုံစမ်း​ရမယ်။ လဘ်​ပေး​လဘ်ယူ လုပ်ပြီး​ အလုပ်ရှင်​တွေဘက်က ကာကွယ်တာမျိုး​ မလုပ်ရဘူး​။ အလုပ်သမား​တွေအတွက်ကို တကယ့်​ သား​သမီး​အရင်း​လို၊​ မိသား​စု အရင်း​အချာလို သ​ဘောထား​ပြီး​တော့​ ကာကွယ်​ပေး​ဖို့​ လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်သမား​တွေက သူတို့​မှာ မချိမဆံ့​ခံစား​ရလို့​ ရင်ထဲက​နေ ​ပေါက်ကွဲပြီး​ထွက်လာတာပါ။ အလုပ်ပြုတ်မှာတို့​၊​ ဒုက္ခ​ရောက်မှာတို့​ကို တအား​စိုး​ရိမ်ပါတယ်။ အခုလို ဆန္ဒပြ​တောင်း​ဆိုတာကလည်း​ သူတို့​ရင်ထဲမှာ နှစ်နဲ့​ချီပြီး​ ခံစား​ရတာ​တွေ ရင်ထဲမှာ မဆန့်​တော့​လို့​ ​ပေါက်ကွဲတာမျိုး​ ​ပေါ်လွင်​နေတယ်။”
CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး မြန်မာနိုင်ငံ သွားရောက်ဖွယ်ရှိ
အမေရိကန် ဗဟို စုံစမ်း ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ David Petraeus ဟာ ဒီနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ စီအိုင်အေ အရာရှိပိုင်းက ပြောဆိုကြောင်း နယူးယောက် တိုင်း သတင်းစာက ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာ Petraeus ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ထိုင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆူရာပေါင်နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ရေး ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုရာမှာ စီအိုင်အေ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ Petraeus ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကျိန်းသေ သွားရောက်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ပြင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်က မိမိကို ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခိုင်းထားတယ်လို့ မစ္စတာ Petraeus က ထိုင်းအရာရှိတွေက်ို ပြောခဲ့ကြောင်း ဘန်ကောက်မြို့က အမည်မဖော်လိုသူ အမေရိကန် အရာရှိတစ်ဦးက နယူးယောက်တိုင်းကို အတည်ပြု ပြောဆိုပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ ချူလာလောင်ကွန် တက္ကသိုလ် အမေရိကန် လေ့လာရေး အစီအစဉ် ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ Robert Fitts ကတော့ စီအိုင်အေ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ Petraeus ရဲ့ မြန်မာပြည် ခရီးဟာ နှစ်နိုင်ငံကြား ပိုပြီး အသေးစိတ် ကျကျ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ ပိုပြီး အတွင်းကျကျ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတွေ ထူထောင် လာနိုင်စရာရှိကြောင်း သုံးသပ် ပြောဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နေပြီဆိုပေမယ့် စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေကို ဥပဒေကြောင်းအရ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် စီးပွားရေးရာ အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဗြိတိန်အခြေစိုက် Maplecroft အမည်ရှိ စစ်တမ်း ကောက်ယူတဲ့အဖွဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ “၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဥပဒေစိုးမိုးမှုညွှန်းကိန်း” အရ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အနည်းပါးဆုံး ၁ဝ နိုင်ငံစာရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ထိပ်ဆုံးက ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားကို ဒုတိယ နေရာမှာ ဖော်ပြထားပြီး၊ ဆိုမာလီယာက တတိယနဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဆီးရီးယားနဲ့ လစ်ဗျားနိုင်ငံတို့က အဆင့် ရှစ်၊ ကိုး၊ တစ်ဆယ်မှာ အသီးသီး ရှိနေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာသေးခင်က နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ မြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်း ပေးတော့မယ့် အရိပ်အယောင်တွေဟာ ကမ္ဘာ့ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုမ္ပဏီတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ အလားအလာကောင်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ အစီရင်ခံစာက ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ပြင် စွမ်းအင်ကြွယ်ဝတဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့ အာဖရိကတိုက် မြောက်ပိုင်းဒေသတွေက မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် မြန်မာ့ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ အရင်းအမြစ်တွေကို နိုင်ငံတကာက ပိုပြီး မျက်စိကျလာနေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေရှည် စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်မှု၊ ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ အာဏာ ကျင့်သုံးမှုစနစ် အပါအဝင် ဥပေဒ စိုးမိုးမှုအပိုင်းမှာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ အစီရင်ခံစာက ထောက်ပြထားပါတယ်။ လောလောဆယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံမှာ ပြဿနာတွေ ရှိနေပြီး နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ ဥပဒေ မရှိသေးသလို ဘဏ်စနစ်ဟာလည်း အများကြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက သုံးသပ် ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
မြန်မာ့ လေကြောင်းကို ဗုံးဖောက်ခွဲမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခံရ
အခုလ ၈ ရက်နဲ့ ၉ ရက်အတွင်း မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်း MAI ကို ဗုံးဖောက်ခွဲမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက် ရေးသားထားတဲ့စာကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကတစ်ဆင့် လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ MAI ပြောခွင့်ရအမျိူးသမီးက အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။
MAI အနေနဲ့ ခရီးသွား ပြည်သူတွေ လုံခြုံရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာတွေကို သတိပေး အကြောင်းကြား ထားတယ်လို့ ပြောပေမယ့် ခြိမ်းခြောက်စာမှာ ပါတဲ့အကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကိုတော့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသွားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခြိမ်းခြောက်စာထဲမှာ "Son of Allah" အလ္လာရဲ့သားလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုက ပေးပို့တဲ့စာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာ သံရုံးတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းတွေကို သတိပေး အကြောင်းကြား ထားပါတယ်။
ရန်ကုန်လေဆိပ် လုံခြုံရေးအဆင့် မြှင့်ထား
မျိုးသိဏ်း | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၂၂ မိနစ်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာ့လေကြောင်း (Myanma Airway) ပိုင် လေယာဉ်များကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိထား၍ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ် လုံခြုံရေးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက် သောကြာနေ့မှ စ၍ လုံခြုံရေးအဆင့် ၁ သို့ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာ့လေကြောင်းပိုင် လေယာဉ်များကို ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မည် ဟူသော ခြိမ်းခြောက်စာကြောင့် လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ
လေကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေးဌာန (DCA- Department of Civil Aviation) က မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကို လုံခြုံရေး အဆင့် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က MAI လေယာဉ်တွေကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ ရှိတယ်ဆိုပြီး DCA က လေဆိပ်လုံခြုံရေး အဆင့် ၁ တိုးမြင့်ထားတယ်။ သူတို့ဝန်ထမ်းတွေကို လုံခြုံရေး သတိရှိဖို့အတွက် ညွှန်ကြားထားတယ်” ဟု ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ အဆင့်မြင့် အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
မွတ်ဆလင် အမျိုးသားတဦးက ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မည်ဟု သတင်းရရှိထားသဖြင့် လုံခြုံရေး အထူးသတိပြုရန် လိုကြောင်း ရန်ကုန်ုလေဆိပ်ရှိ MCS (Myanmar Cargo Services) ဂိုဒေါင်များတွင် သတိပေးစာများ ကပ်ထားကြောင်း မျက်မြင် သက်သေများက ပြောသည်။
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား ယင်းသို့ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း သာမန် ခရီးသွားလာသူများကမူ ရန်ကုန်လေဆိပ်အတွင်း ထူးခြားလုံခြုံရေး အစီအစဉ်များ မတွေ့ရကြောင်း ပြောသည်။
ရန်ကုန်မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသည့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနက်မှ တပ်မတော်(လေ) နှင့် စရဖ (လေ) စသည့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့များကို မတ်လ ၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ရုတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီး
ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များနှင့် DCA တို့ကသာ တာဝန်ယူသွားမည် ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ လကုန်ပိုင်းက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်သို့ လာရောက် ပြီး DCA ၊ စီအိုင်ဒီ၊ ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့များမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး စသည့် တာဝန်သူများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး
ဖေဖော်ဝါရီ လလယ်ပိုင်းမှစ၍ လုံခြုံရေးတာဝန်များ လွှဲပြောင်းရယူရန် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒီတွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင် ခွပ်ဒေါင်းအလံကို ကျောင်းသားမျိုးဆက် အသီးသီးက လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်ခဲ့တာဟာ သမိုင်းပြရုပ်တစ်ခုပဲလို့ ၈၈ မျိူးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြောပါတယ်။ “အစိုးရ အဆက်ဆက်က ကျွန်တော်တို့ကို နာလန်မထူအောင်၊ ဒေါင်းအလံတွေ မထူနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း ဒေါင်းအလံကို လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခဲ့တာ မှန်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျောင်းသားမှာ ကျောင်းသားသွေး ရှိတယ်ဗျ။ အဲဒီသွေးက ဘယ်တော့မှ မခန်းသွားဘူး။ ကျောင်းသားတွေ ခေတ်အဆက်ဆက် စီးဆင်းခဲ့တဲ့ သွေးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ လက်ထက်ကနေတစ်ဆင့် အခု နောက်ဆုံး မျိုးဆက်အထိပေါ့ဗျာ၊ အဲဒါ ဆက်ပြီးတော့ စီးဆင်းနေဆဲပဲ။ ကျွန်တော်တို့က မြစ်ကြီးတစ်စင်းနဲ့တူတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဒီမြစ်ရေဟာ ဘယ်တော့မှ မခန်းသွားဘူး။ ရှေ့က မြစ်ရေတွေ ပင်လယ်ထဲ ရောက်သွားပေမယ့် နောက်က မြစ်က ဆက်စီးနေဆဲပဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သက်သေ ပြနိုင်ခဲ့တာပါ” ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို ၁၉၆၂ ဆဲဗင်း ဂျူလိုင်လှုပ်ရှားမှု၊ ၁၉၇၄ ဦးသန့် အရေးအခင်းအပြင် ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၈ နဲ့ ၂၀၀၇ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုတွေက ခေါင်းဆောင် အများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ၁၉၆၂ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးလှရွှေနဲ့ ၁၉၇၄ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဦးလှစောတို့လည်း ပါဝင်ကြပါတယ်။ ဒီပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်အားလုံးဟာ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်မှာ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် အသီးသီး ချမှတ်ခံခဲ့ရသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်ခင်ခင်အိက စုစည်းတင်ပြပါမယ်။
တိုင်ရီဖိနပ်စက်ရုံက အလုပ်သမား ၂၅၀၀ ကျော်ဟာ ဒီကနေ့ သုံးရက်မြောက်နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကို အရှိန်မြှင့်တောင်းဆို
အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ပါ ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ အကူအညီပေးပါသည်
Legal Aid Project ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသက်(၁၈)နှစ်အောက်ရှိ ပြစ်မူကျူးလွန်စော်ကားခံရသော ကလေးသူငယ်များ ၊ လူငယ်များနှင့် သက်သေများ ၊ ပြစ်မူကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော ကလေးသူငယ်များ နှင့် လူငယ်များ၊ အသက်(၁၈)နှစ် ကျော်သော်လည်း အမျိုးသမီးဖြစ်သည့်အတွက် ပြစ်မူကျူးလွန်စော်ကားခံရသော(female survivos of gender based violence) အမျိုးသမီးများအတွက် အမူလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခ (ရှေ့နေခ) တစ်စုံတစ်ရာမယူဘဲ ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ ကူညီပေးသည့် စီမံချက်ဖြစ်ပါသည်
-မသိနားမလည်၍ သော်လည်းကောင်း၊ တရားရုံးစရိတ် မတတ်နိုင်၍သော်လည်းကောင်း၊ ရှေ့နေငှားရမ်းခ မတတ်နိုင်၍သော်လည်းကောင်း၊ မိမိနစ်နာသောအမူကိုတိုင်တန်းရန် (သို့) စွပ်စွဲခံရသောအမူကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် အခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရန်
-ပြစ်မူကျူးလွန် စော်ကားခံရသူ (နစ်နာသူ) အသက်(၁၈)နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်၊ လူငယ်များအား ကျောင်းစရိတ်အခက်အခဲရှိပါက ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ကူညီရန်
xxx အသက်(၁၈)နှစ်အောက် ကလေးများ၊လူငယ်များ ပြစ်မူကျူးလွန်ကြောင်းစွပ်စွဲခံရ၍ တရားရုံးတွင် အမူရင်ဆိုင်ရလျှင်
" အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ပါ ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ အကူအညီ ပေးပါသည် "
Legal Aid Project အောက်တွင် အမူလိုက်ပါဆောင်ရွက်သော ရှေ့နေများအား ရှေ့နေခ၊ ခရီးစရိတ်၊ စားစရိတ်၊ စာရွက်စာတမ်းခ များကို အမူသည်များက လုံးဝ မပေးရပါ၊
ရှေု့နေများမှ ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာတောင်းခံလာပါက စီမံကိန်းမန်နေဂျာထံတွင် တိုင်တန်းနိုင်ပါသည်။
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။၀၉-၂၀၅၄၇၈၂၊ ၀၁-၃၉၈၂၁၅
ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးရာကို ၀န်ကြီးချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုး...
၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့  အနာဂတ် နိုင်ငံရေးခြေ...
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးမှု မြန်မာ အား...
လှိုင်သာယာ ဆန္ဒပြအလုပ်သမား​များ​ကို အလုပ်ဖြုတ်မည်ဟု...
မြန်မာ့ လေကြောင်းကို ဗုံးဖောက်ခွဲမယ်လို့ ခြိမ်းခြေ...
တိုင်ရီဖိနပ်စက်ရုံက အလုပ်သမား ၂၅၀၀ ကျော်ဟာ ဒီကနေ့ ...